Ọdịnihu nke vidiyo vidiyo na ọchụchọ dị ebe a! | Martech Zone
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ ma bụrụkwa onye na-agbanwe egwuregwu maka ahịa ekwentị. Ihuenyo amalitela na Netherlands. Ogologo Oge zitere m njikọ nke teknụzụ ọhụrụ a… Layar kpọrọ ya ihe nchọgharị na-eme ka ọ bụrụ eziokwu. M na-akpọ ya ọdịnihu!
Layar bụ ngwa efu na ekwentị mkpanaaka gị nke gosipụtara ihe gbara gị gburugburu site na igosipụta ezigbo oge ozi dijitalụ n'elu eziokwu site na igwefoto nke ekwentị gị.
Layar dị maka T-Mobile G1, HTC Ime Anwansi na ndị ọzọ android igwe na A gam akporo maka Netherlands. A ga-atụkwasị mba ndị ọzọ ma emechaa. Amabeghị ụbọchị ị ga-ewepụta maka mba ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịhụghị vidiyo a na post a, gbaa mbọ pịa pịa ka ịhụ nke mbụ ihe nchọgharị na-agbakwunye n'ezie! Uche m na-agba oso na ohere di ebube nke teknụzụ dị ka nke a!
Tags: androidkwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwug1anwansi htcihuenyoMobile na Mbadamba ụrọt-mobilet-mkpanaka g-1
Jul 16, 2009 na 12: 42 AM
Mpempe akwụkwọ dị ịtụnanya. Echiche ọ bụla banyere otu ha si eme ya?
Jul 16, 2009 na 1: 29 AM
Ọ dị ka GPS na vidiyo, Adam. N'ezie dị ịtụnanya. Cheedị nke a na ngwaahịa na ihu ihu. Kama ichefuru aha ndị mmadụ, m nwere ike ịtụwa ha akwụkwọ adres m!
Jul 16, 2009 na 2:27 PM
Ọ bụ ezigbo ngosi - mana ọ bụ ebe a dị ka ụlọ nyocha ebe ụfọdụ.
Enwere m ike ịhụ ihe a na-eme na iPhone. Onye azimuth detector ha tinyere ebe ahụ na Igwefoto na GPS ga-eme maka ụfọdụ ngwa ọdịnala ịtụnanya methinks.